Home Wararka Fashilka Rooble ee Doorashada Dadban, maxaadan ogeyn oo socda?
Fashilka Rooble ee Doorashada Dadban, maxaadan ogeyn oo socda?
RW Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa loo dhiibay maamulka iyo Amniga Doorashooyinka kaddib markii uu ku fashilmay Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullah Farmaajo kaasoo dalka u horseeday xasilooni darro siyaasadeed oo lagu sigtay in uu dalka markale ka dhaco dagaal sokeeye.
Waxaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo Midowga Murashiixnta aay si weyn u soo dhaweeyeen in Rooble oo hoggaamiyo Doorashada 2021. Rooble iyo Hoggaanka Dowlad Goboleedyada ayaa dhowr jeer ka shiray sidii loo gaari lahaa Doorasho iyadoo jadwalkii Doorashada ee la soo saaray Bishii Juun lagu sheegay in aay Doorashada Madaxweynaha aay dhici doonto bisha Oktoober 10, 2021, ka horna bilaha Ogoosto iyo September la dooran doono labada aqal ee Baarlabaanka JFS.
Haddaba, halkeey wax ka qaldameen? MOL oo la hadashay dad kala duwan oo si aad ah ugu dhow xafiiska RW Rooble iyo hoggaanka Dowlad Goboleedyada ayaa waxaan ku ogaanay qodobada hoose
Rooble ayaa ka dhex arkay fursad dhaqaale qabashada Doorashada iyo in uu cadaadis ku saaray deeq bixiyayaasha in lacagta looga talogalay Doorashada aay si degdeg ah ugu soo shubaan koonta uu isaga ka furay Bangiga dhexe oo qof aan Maxamed Xuseen Rooble uusan lacag kala bixi karin koontaas
Wuxuu heshiis hoose la galay Maamulada Jubbaland iyo Puntland taasoo loo badinayo in uu daneynayo in uu is sharaxo ama uu qorsheynayo in labadaas maamul aay taageeraan Musharaxa uu Rooble wato taasoo loo badinayo in uu yahay Cabdikarin Guuleed oo laba jeer ku soo fashilmay siyaasadda
Rooble ayaa bilaabay safaro dibadda uu dhaqaale ku raadsanayo waxaana uu tagay Kenya oo aay isaga iyo Cabdikariin Guuleed aay ka shaqeynayaan in Qaadka loo fasaxo Kenya iyagana aay lacag dhan 10 Milyan aay ka qaataan 20 shirkadood ee haysta shatiga keenista Qaadka Kenya.
Waxaa beesha caalamka iyo shacabkaba u caddaatay in Rooble aanu dan ka lahayn Doorashada wuxuuna iska indha tiray caqabadaha Doorasho ee ka jira Galmudug iyo Hirshabelle.
Iyadoo aay intaa jirto ayaa waxaa maalintii shalay ahayd Golaha Wadatashiga Qaran aay soo saareen toddoba qodob War-murtiyeedka kasoo baxay Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa waxaa lagu soo saaray 7 habraac oo doorashooyinka ah, kuwaasi oo qaarkood ay ka taagnayeen muran.
Midowga Musharaxiinta ayaa diiday habraacii uu soo saaray Golaha Wadatashiga Qaran. Golaha ayaa sheegay in habraacii kasoo baxay Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada uu yahay mid khilaafsan dastuurka dalka iyo heshiiskii 27-Maajo, islamarkaana si toos ah loogu gacan geliyay madaxda dowlad goboleedyada dalka, si lamid ah middii Aqalka Sare.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa noqday Mushaxa kaliya ee soo dhaweeyay warmurtiyeedka aay soo saareen Golaha Wadashiga kaasoo sii badiyay shakiga laga qabay gacan saarka aay leeyihiin Guuleed & Rooble.